We.com.mm - MCU ရဲ့ နောင်လာမယ့် Phase4မှာ Thor အဖြစ် ထပ်မံပါဝင်လာဦးမယ့် ခရစ္စဟမ်းစဝေါ့သ်
MCU ရဲ့ နောင်လာမယ့် Phase4မှာ Thor အဖြစ် ထပ်မံပါဝင်လာဦးမယ့် ခရစ္စဟမ်းစဝေါ့သ်
2 years ago by Katie Scarlett
MCU ရဲ့ Timeline တစ်ခုကို အဆုံးသတ်တဲ့ ရုပ်ရှင်အဖြစ် လူသိများတဲ့ နာမည်ကျော် “Avengers: Endgame” ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါ မာဗယ်အနေနဲ့ နောက်ကာလအသစ်တစ်ခုကို ထပ်မံဖန်တီးဖို့ အလားအလာရှိနေပါတယ်။ အဲဒီအသစ်ဖန်တီးမယ့် Phase4မှာတော့ မူလ Origingal Avengers အဖွဲ့ဝင်တချို့ကိုတော့ လုံးဝထပ်တွေ့ရ တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တချို့လည်း ကျန်ရှိနေဦးမှာပါ။ အဲဒီလိုကျန်နေဦးမယ့် ဇာတ်ကောင်တွေထဲမှာ Thor လည်း ပါဝင်မယ်ဆိုတာကို နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ ခန့်မှန်းချက်အရ သိရပါတယ်။
နာမည်ကျော်သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ The Hollywood Reporter ရဲ့ ဖော်ပြချက်အရဆိုရင် Thor ဇာတ်ကောင်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ အသက် ၃၅ နှစ်အရွယ် ဟောလိဝုဒ်မင်းသားချော ခရစ္စဟမ်းစဝေါ့သ်ဟာ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်က ရုပ်ရှင် ၅ ကားစာ စာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာတော့ Avengers: Infinity War နဲ့ Endgame တို့အတွက် မာဗယ်နဲ့ ထပ်မံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ပြီး သရုပ်ဆောင်ကြေး ၁၅ သန်းကနေ သန်း ၂၀ ကြားနဲ့ သဘောတူညီမှုရခဲ့ပါတယ်။ တခြား phase အသစ်ရဲ့ ရုပ်ရှင်တွေအတွက်လည်း အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့ ဆိုထားပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် ပရိသတ်တွေကရော နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေကရော ဟမ်းစဝေါ့သ်တစ်ယောက် နောင်လာမယ့် မာဗယ်ကားတွေမှာ ဆက်လက်ပါဝင်လိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်ထားကြပါတယ်။ မာဗယ်က တရားဝင် မကြေညာရသေးပေမယ့် သူတို့ကိုယ်တိုင်က Thor နေရာအတွက် ဟမ်းစဝေါ့သ်ကိုပဲ ဆက်လက် သရုပ်ဆောင်စေ ဖို့ ဆန္ဒရှိနေပြီး ဟမ်းစဝေါ့သ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း Thor ဇာတ်ကောင်အဖြစ် ဆက်လက်သရုပ်ဆောင်ချင်တဲ့ အကြောင်း ဖွင့်ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။
အမှန်တော့ ဟမ်းစဝေါ့သ်ဟာ ဒုတိယမြောက် Thor ဇာတ်လမ်း ပြသပြီးချိန်မှာ အဲဒီဇာတ်ကောင်ကို ငြီးငွေ့ခဲ့ဖူးပေမယ့် Thor: Ragnarok (2017) ကို ရိုက်ကူးပြီးချိန်မှာတော့ ဟမ်းစဝေါ့သ်ဟာ Thor ဇာတ်ကောင်အပေါ် ပြန်လည်စိတ်ဝင်တစား ရှိလာခဲ့တယ်လို့လည်း ဝန်ခံပြောကြားခဲ့ဖူးပါတယ်။ Endgame မှာလည်း Thor ဟာ Guardians of the Galaxy အဖွဲ့နဲ့ လိုက်ပါသွားတဲ့ပုံမျိုး ပြသထားတာကြောင့် လာမယ့် GOTG ဇာတ်လမ်းသစ် မှာ Thor ပါဝင်လာမယ်လို့လည်း ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းတုန်းက ကပ္ပတိန် အမေရိကအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မင်းသားခရစ္စအီဗန်အနေနဲ့ မာဗယ်နဲ့ စာချုပ် လုံးဝအပြီးသတ်သွားကြောင်း အတည်ပြုကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် Thor ဇာတ်ကောင်ဟာ Avengers ရဲ့ Big Three အဖြစ် လူသိများတဲ့ စူပါဟီးရိုး ၃ ယောက် (Iron Man, Captain America နဲ့ Thor) ထဲမှာ ကျန်နေခဲ့မယ့် တစ်ခုတည်းသော ဇာတ်ကောင်လို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။
by Cherry Mon
Ref; We Got This Covered, Cosmic Book News, Screen Geek
we.com.mm တွင် ဖော်ပြပါရှိသော ဆောင်းပါးများကို မည်သည့် Website နှင့် Social Media များပေါ်တွင် ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြခြင်းကို ခွင့်မပြုကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဒီနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
K Pop အဆိုတော်ဘဝမဖြစ်ခင် အချိန်အကြာကြီးလေ့ကျင့်ခဲ့ရသူများ
3 years ago by Kevin Han
ဆရာတော် အရှင်ဆန္ဒာဓိက ရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ကို ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ မုန်းစွဲရုပ်ရှင်မှ သရုပ်ဆောင်ပုံရိပ်များ
2 years ago by Sora
ပရိသတ်က အကောင်းဆုံး လူသတ်သမားဆုကို ပေးခဲ့တယ်လို့ ပြောလာတဲ့ အောင်မင်းခန့်
Pee mak မင်းသမီးလေး Mai Davika ပြောတဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာ
2 years ago by sweet
Kiss senses ရိုက်ခန်းဆို ချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားကြတဲ့ မင်းသားတွေရဲ့ Type ပုံစံနှစ်မျိုး
Single ဖြစ်နေတဲ့ Lee Min Ho ကို ဘယ်သူ ချစ်သူတော်ချင်လဲ?
Paris Fashion Week မှာ Dior ရှိူးပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်Mဆိုင်းလု
1 years ago by Paulina
အချစ်ရေးမှာ ရင့်ကျက်သွားတဲ့အမျိုးသမီးတွေ မလုပ်တော့တဲ့အရာ (၁၂) ခု
1 years ago by Katie Scarlett
ဝမ် 100 Billon ရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို တစ်ဝက်ဆီခွဲယူဖို့ သဘောတူလိုက်တဲ့ Song Joong Ki နဲ့ Song Hye Ko
1 years ago by Sora
ခရစ္စအီဗန်အတွက် Iron Man ကြီးရဲ့လက်ဆောင်၊ ကပ္ပတိန်အမေရိကဗားရှင်း ဂန္ဓဝင်ပြိုင်ကား
ကလေးငယ်များကို လက်ဖက် မကျွေးသင့်ပါ
1 years ago by June Nine Aung
ကြက်သားအစိမ်းတုံးက အသက်ပြန်ဝင်လာပြီး ထမင်းစားပွဲပေါ်က ခုန်ဆင်းသွားတဲ့ ဖြစ်ရပ်ဆန်း
Create your best life. Get lifestyle content and shopping curated for you and delivered daily.
©2017-2020 We Media.